Iindaba -umzi mveliso wombhobho weplastikhi omtsha wase China unelona zinga lokukhula ngokukhawuleza emhlabeni
Ishishini lombhobho omtsha wase China unelona zinga lokukhula ngokukhawuleza emhlabeni
Ukusukela ngo-2000, imveliso yombhobho weplastiki kwindawo yesibini kwihlabathi. Ngowama-2008, imveliso yeTshayina iyonke yemibhobho yeplastiki yafikelela kwizigidi eziyi-4.593 zeetoni. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ishishini kumbhobho weplastiki eTshayina uvele ngokukhawuleza. Imveliso inyukile ukusuka kwiitoni ezingama-200,000 ngo-1990 ukuya kuma-800,000 eetoni ngo-2000, kwaye igcine izinga lokukhula lonyaka elimalunga ne-15%.
Ukusetyenziswa okungaphantsi kwemithombo yeplastiki yeHDPE ikakhulu kubandakanya imibhobho yokuhambisa amanzi ngaphandle, imibhobho yokuhambisa amanzi engcwatyelweyo, imibhobho yebhatyi, ulwakhiwo lwamanzi kunye nemibhobho yokuhambisa amanzi, njl. Idatha ikhethwe ngonyaka ka-2000-2008 kuhlalutyo, safumanisa ukuba kukho unxibelelwano olomeleleyo oluqinisekileyo phakathi komzi mveliso wombhobho weplastiki kunye nomhlaba ogqityiweyo wokuthengiswa kwezindlu.
Average Umyinge wokukhula kwe-PPR kunye ne-PE imibhobho yeplastiki kwixa elizayo izakubangaphezulu kunaleyo yecandelo lemibhobho: Okwangoku, uninzi lweeplastikhi zemibhobho yamanye amazwe yezixhobo ezahlukeneyo kunye nolwakhiwo sele luvelisiwe lwasetyenziswa e-China. Kwiintsuku zokuqala, zazininzi iipayipi zeplastiki ze-PVC e-China. Babesetyenziselwa imibhobho yocingo yombane kunye nemibhobho yelindle. Nangona kunjalo, imibhobho ye-PVC ineentsilelo ezithile ngokubhekisele kukumelana neqabaka, ukumelana nobushushu, kunye namandla. Izinga lokukhula kweemarike liya kuba sezantsi kunaleyo yemibhobho yeplastiki (kubandakanya iPPR). , PE, PB, njl.), Izinga lokukhula kwishishini lombhobho weplastiki elitsha ligqithile kwi-20%, ethe yaba sisikhokelo sophuhliso lombhobho weplastiki waseTshayina.